China High Power Fiber Laser ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - XTLASER
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > မြင့်မားသောပါဝါဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
XTLASER သည်ပြီးခဲ့သည့် ၁၇ နှစ်အတွင်း Fiber လေဆာရောင်ခြည်ပြုခြင်းနှင့်ဖြတ်ခြင်းနည်းပညာကိုအထူးပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုစျေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားစွာယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Fiber လေဆာဖြတ်စက်၊ ဖိုင်ဘာလေဆာအမှတ်အသားစက်၊ လေဆာဂဟေစက်၊ လေဆာထုစက်၊ XTLASER တွင်အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသော ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ရှိပြီးအတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသော ၀ န်ထမ်းများသည် ၀ ယ်ယူသူများအတွက်အရည်အသွေးနှင့်ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိကဝတ်သည်နည်းပညာတိုးတက်မှု၊ သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ သိပ္ပံဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုစံချိန်စံညွှန်းများ၊ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုသဘောတရားများကို။
မြင့်မားသောပါဝါဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်သည့်စက်သည်နိုက်ထရိုဂျင်နှင့်လေဖိအားမြင့်ဖိအားပေးစက်များကိုဖြတ်တောက်နိုင်သဖြင့်ပိုမိုလျင်မြန်စွာဖြတ်တောက်နိုင်ပြီးမြန်ဆန်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုဒုတိယအဆင့်မပါဘဲချောမွေ့စေသည်။ ထို့အပြင်လေထုဖြတ်တောက်ခြင်းသည်အသုံးစရိတ်နည်းသောကြောင့်စားသုံးကုန်ပစ္စည်းများ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်းလျှော့ချနိုင်သည်။ Ultra-high power laser laser ဖြတ်တောက်ခြင်း၏အားသာချက်များကိုပိုမိုခံစားလိုပါသလား။
XTLASER 10kW + လေဆာဖြတ်စက်သည်သင်သွားရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
စက်များအားလုံးသည် European Union CE authentication ကိုအောင်မြင်စွာရရှိခဲ့ပြီးï¼ŒAmerican FDA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိခဲ့ပြီး ISO 9001.XTLASER နည်းပညာကိုကမ္ဘာ့စျေးကွက်တွင်လည်းကောင်း၊ ဂျာမနီ၊ အမေရိကန်၊ ဂျပန်၊ ဗြိတိန်၊ ရုရှား၊ လူသိများသောကုမ္ပဏီများနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးပြည်တွင်းလေဆာသုတေသနဌာနများသည်ရေရှည်ဖော်ရွေသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ နှစ်များတစ်လျှောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုနိုင်ငံပေါင်း ၁၄၀ ကျော်သို့တင်ပို့ရောင်းချခဲ့သည်။ အကျိုးရှိသည့်လေဆာသတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တည်ဆောက်ခြင်း၊ အဆင့်မြင့်လေဆာနည်းပညာများမှထုတ်လုပ်သောအခွင့်အလမ်းများကိုရယူခြင်းနှင့်လေဆာရောင်ခြည်ဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းတို့အတွက် ကမ္ဘာပေါ်ရှိပံ့ပိုးပေးသူအနည်းငယ်သာရရှိနိုင်သောတော်လှန်ရေးစွမ်းအားမြင့်ဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်စက်ကိုနည်းပညာနှင့်ဘာမျှမတူပါ။
12000w High Power Fiber Laser ဖြတ်စက်
12000w High Power Fiber Laser ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစီးပွါးရေးအကျိုးကျေးဇူးများရရှိရန်ထုတ်လုပ်သူများအားကူညီနိုင်သည့်ပိုမိုပြင်းထန်သောဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ XTLASER သည် ၁၇ နှစ်မြောက်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း ၁၄ ခုသို့တင်ပို့သည်။
အကာအကွယ် Cover Fiber လေဆာရောင်ခြည်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
ကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောပါဝါဖိုင်ဘာလေဆာစက်ဖိုင်ဘာလေဆာရောင်ခြည်ဖြတ်စက်၏အသုံးချပစ္စည်းများ - ပါးလွှာသောသတ္တုပြားကိုဖြတ်ရာတွင်အသုံးပြုသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသော ၀.၃ မှ ၃ မီလီမီတာရှိကာဗွန်သံမဏိပြားများကိုဖြတ်တောက်ရာတွင်သံမဏိပြား၊ အလူမီနီယမ်အလွိုင်းပြား၊ , electrolyticplate, ဆီလီကွန်သံမဏိ, တိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ်, လူမီနီယမ်သွပ်ပြားနှင့်အခြားသတ္တု။
ကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောပါဝါဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်စက်ဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်စက်၏အသုံးပြုမှုပစ္စည်းများ - ပါးလွှာသောသတ္တုပြားကိုဖြတ်ရာတွင်အသုံးပြုသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသော ၀.၃ မှ ၃ မီလီမီတာကာဗွန်သံမဏိပြားများကိုဖြတ်တောက်ရာတွင်သံမဏိပြား၊ အလူမီနီယမ်အလွိုင်းပြား၊ , electrolyticplate, ဆီလီကွန်သံမဏိ, တိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ်, လူမီနီယမ်သွပ်ပြားနှင့်အခြားသတ္တု။
XTLASER သည်ကျော်ကြားသော မြင့်မားသောပါဝါဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက် ထုတ်လုပ်သူနှင့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်ဖန်စီဒီဇိုင်းများရှိသည်။ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော မြင့်မားသောပါဝါဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက် ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သောအနိမ့်ဈေးနှင့်စျေးပေါသောစျေးနှုန်းဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် CE အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်မှာယူမှုကိုယခုမှာယူလျှင်၊ သင်၌၎င်းမှာရှိပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်! လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းစာရင်းသာမကဈေးနှုန်းများလည်းပါ ၀ င်မည်ဖြစ်သည်။ ငါလက်ကားရောင်းချင်ရင်မင်းငါ့ကိုဘယ်စျေးနှုန်းပေးမှာလဲ? သင်၏လက်ကားအရေအတွက်များလွန်းပါကစက်ရုံစျေးနှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။ ဈေးနှုန်းချိုသာပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသောကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာရောက်ရန်သင့်ကိုကြိုဆိုပါသည်။ မြင့်မားသောပါဝါဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှလျှော့စျေးထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူပူးပေါင်းမျှော်လင့်, သင်ပိုမိုသိလိုလျှင်, သင်ယခုကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်, ငါတို့အချိန်မီသင်ပြန်ကြားမည်!